स्थानीय चुनाव कुन संरचनामा गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद सुरु « Pahilo News
स्थानीय चुनाव कुन संरचनामा गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद सुरु
प्रकाशित मिति : 18 December, 2016 10:51 am
३ पुस । सत्तारुढ दलहरुभित्रै स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु नै कुन निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा फसेका छन् ।
केही दिनअघि, प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल हुँदा काँग्रेस सभापति देउवाले ‘पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्नेमा तीन दलबीच सहमति भएको’ खुलासा गरेका थिए । काँग्रेस सभापति देउवाले उक्त कुरा बताए पनि एमाले र प्रधानमन्त्रीले भने मुख खोलेका थिएनन् ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने देउवाको भनाइको खण्डन गर्दै ‘त्यस्तो सहमति नभएको’ बताएका छन् । शनिबार चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रष्टै शब्दमा भने, ‘स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सन्दर्भमा हामी तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो । देउवाजीले पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव गराऔं भन्नुभएको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीजीले नयाँ संरचनामा गर्न समय पुग्दैन भने पुरानैमा भए पनि गरौं भन्नुभएको हो । तर, कसरी गर्ने भन्नेबारे हामीबीच सहमति भएको छैन ।’
त्यसो त, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइसँगै काँग्रेस सभापति देउवाले कुनै सहमति नै नभई हचुवाकै भरमा पुरानै संरचनामा टेकेर स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको बताएका रहेछन् भन्ने खुलेको छ । किनकि, अहिले माओवादी–केन्द्रका नेताहरु पुरानो संरचनामा चुनाव गर्न तयार देखिँदैनन् । माओवादी–केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरुको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल पुरानो संरचनाअनुरुप स्थानीय चुनाव गराउने मनस्थितिबाट पछि हटेको बुझिएको छ ।
के एमाले संघीय संसद्को चुनाव चाहन्छ ?
एमालेले भने पछिल्लो समय स्थानीय तहको नभई सिधै संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आवाज उठाउन थालेको छ । स्थानीय तह वा निकायमध्ये कुनको निर्वाचन गराउने भन्ने विवाद बढ्दै गएको हुँदा र सत्तारुढ दलभित्रै त्यसबारे मतैक्यता नदेखिएको हुँदा उपयुक्त विकल्पको रुपमा एमालेले संघीय संसद्को निर्वाचनको कुरा उठाएको देखिन्छ । स्थानीय तह वा निकायमध्ये कुनको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद तीव्र हुँदै जाँदा समय घर्किने अवस्था देखिएको हुँदा एमालेले संघीय संसद्को विकल्प अघि सारेको हो ।
काँग्रेस सभापति देउवा, नेताहरु रामशरण महतलगायत स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र अधिकांश नेताहरु स्थानीय तहको पक्षमा देखिन्छन् । तर, एमालेले भने संघीय संसद्को विकल्प अघि सार्ने संकेत देखाएको छ । यी तीन दलको आ–आफ्नै रोडम्याप हुँदा ०७४ माघको पहिलो साताभित्र तीनै तहको निर्वाचन नै नहुने त होइन ? यस्तो आशंका अहिले नेपाली राजनीतिमा उब्जिएको छ ।